အန်ဒါမန်လူမျိုးစုဆက်နွယ်မှုစီမံကိန်းနှင့်ပလန်ထွိုင်တို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်၍ ပလန်ထွိုင်၏ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားများဘ၀တိုးတက်မြင့်မားရေးစီမံကိန်း | AndamanCEIA
အန်ဒါမန်လူမျိုးစုဆက်နွယ်မှုစီမံကိန်းနှင့်ပလန်ထွိုင်တို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်၍ ပလန်ထွိုင်၏ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားများဘ၀တိုးတက်မြင့်မားရေးစီမံကိန်း
Leaveareply	အန်ဒါမန်လူမျိုးစုဆက်နွယ်မှုစီမံကိန်းနှင့်ပလန်ထွိုင်တို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်၍ပလန်ထွိုင်၏ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများဘ၀တိုးတက်မြင့်မားရေးစီမံကိန်း
အန်တမန်လူမျိုးစုဆက်နွယ်မှုစီမံကိန်းနှင့် ပလန်ထွိုင်ခရီအေ့ရှင်းကုမ္ပဏီလီမီတစ်တို့ပူးပေါင်း၍ ပလန် ထွိုင်အလုပ်ရုံမှမြန်မာ နှင့် ကမ္ဘောဒီးယားရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများဘ၀တိုးတက်မြင့်မားရေးစီမံ ကိန်းတစ်ခု အကောင်ထည်ဖော်ခဲ့ကြပါသည်။ ပလန်ထွိုင်ခရီအေ့ရှင်းကုမ္ပဏီ ဒါရိုက်တာ နိုင်ဝိမွန် ၀ိရဖွန်စ၀ါန် မှလည်း ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများဘ၀တိုးတက်မြင့်မားရေးလုပ်ငန်းစဉ်အတွက် အစဉ် မပြတ် ကျိုးစားအားထုတ်ခဲ့ပါသည်။ လွန်ခဲ့သော 2555 ခုနှစ်တွင် ကုမ္ပဏီအနေနှင့် မြန်မာနှင့် ကမ္ဘော ဒီးယားနိုင်ငံများမှ အလုပ်သမားများအား MOU အလုပ်သမားခေါ်ယူခြင်းဖြင့် စတင်လက်ခံခဲ့ပါသည်။ နိုင်ဝိမွန်အနေနှင့် အလုပ်သမားခွဲခြားခြင်းမရှိ၊ လူမျိုးရေးခွဲခြားခြင်းမရှိပဲ၊ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများ အား တန်းတူညီမျှဆက်ဆံခဲ့ပါသည်။ ထိုင်းအလုပ်သမားများနှင့်တန်းတူအခွင့်အရေးပေးခြင်း၊ အခြေခံ အလုပ်အားခကိုလည်း တနေ့ဘတ် ၃၀၀ နှုန်းဖြင့်ပေးခြင်း နှင့် အခြားလူမှုဖူလုံရေးအခွင့်အရေးများဖြစ် သော နေ့လည်စာအခမဲ့၊ တည်းခိုခန်းအခမဲ့၊ အလုပ်အသွားအပြန်အကြိုအပို့လုပ်ပေးခြင်းများဝန် ဆောင်ပေးလျက်ရှိသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများဘ၀တိုးတက်မြင့်မားရေး စီမံ ကိန်းသည် ထိုမျှနှင့်မကပဲ နိုင်ဝိမွန်အနေဖြင့် မြန်မာ နှင့် ကမ္ဘောဒီးယားရွှေ့ပြောငန်းအလုပ်သမားများ၏ အိမ်သုံးစရိတ်များလျော့နည်းစေသောနည်းလမ်းများကိုရေးဆွဲခဲ့ပါသည်။ အန်ဒါမန်လူမျိုးစုဆက်နွယ်မှုစီမံကိန်းအဖွဲ့သည် စူနာမိကာလပြီးကတည်းက ယနေ့တိုင် ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားများအား အသင်းအဖွဲ့လေးများတည်ထောင်ပေးရာ၌ အတွေ့အကြုံရှိသူဖြစ်သည်။ ထို့ ကြောင့် အန်ဒါမန်လူမျိုးစုဆက်နွယ်မှုစီမံကိန်းအဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်းကာ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများဘ၀ တိုးတက်မြင့်မားရေးစီမံကိန်းကိုဆောင်ရွက်ရာတွင် ငါးမွေးမြူးရေး၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ခြံစိုက်ခြင်း နှင့် ငွေစုငွေချေးအသင်းဖွဲ့ပေးခြင်း စသည်ဖြင့်စီမံပေးလျက်ရှိသည်။ အန်ဒါမန်လူမျိုးစုဆက်နွယ်မှုစီမံကိန်း မှ အကြံပေးအရာရှိများဖြစ်သော Lisa Hollingshed နှင့် Jane Rasbash မန်နေဂျာ နန်းကျေ(န်)ကျီ(န်) အေမ္မ တို့မှလည်း အစီစဉ်များရေးဆွဲကာ အန်ဒါမန်လူမျိုးစုဆက်နွယ်မှုစီမံကိန်းအနေနှင့် အသင်းအဖွဲ့ များထူးထောင်ခြင်း၊ အသင်းအဖွဲ့များအား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေခြင်း၊ ငွေစုငွေချေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ပိုမိုနား လည်စေခြင်း နှင့် လူထုအစွမ်းရည်မြှင့်တင်ပေးခြင်းတို့ကို ပံ့ပိုးပေးခြင်းဖြစ်သည်။ စီးပွားရေးသမားတွေ အနေနှင့် ယခုလိုအလုပ်သမားများဘ၀တိုးတက်မြင့်မားရေးအား စိတ်ဝင်တစားနှင့်လက်တွေ့ အကောင်ထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လာသည်ကို မိမိတို့အတွက်နိမိတ်ကောင်းလို့ ယူဆရပါမည်။
နိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်းမှ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများ လူထုအခြေခံအသင်းများ အခြေခိုင်စွာတည်ဆောက်ခြင်းအတွက်စီမီနာတက်ရောက်ခြင်း ထားဝယ်ရေနက်ဆိပ်ကမ်းစီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်၍ လေ့လာမှုတစ်ခုအပေါ် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အား မည်ကဲ့သို့ထိခိုက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်သလဲဟု နိုင်ဒေါင်စယာန်(မ်)မှ ကျူလာလောင်ကွန်တက္ကသိုလ်၌ ပြုလုပ်သော အခြေခံလူထုအသင်းအခြေခိုင်တည်တံ့ရေးစီမီနာတစ်ခုတွင် မေးခွန်းထုတ်ခဲ့ပါသည်။ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ပဋိပက္ခအဖွဲ့၊ ကျူလာလောင်ကွန်တက္ကသိုလ်၊ End Law အဖွဲ့အစည်း နှင့် ကုမာမိုတို ကက်ကုအင်တက္ကသိုလ် (ဂျပန်နိုင်ငံ) စသည့်အဖွဲ့အစည်းများပူးပေါင်းပါ၍ ကမ္ဘာ့နေရာအနှံ့တွင် ပျက် ပွားတော့မယ့်သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များကာကွယ်ရာတွင် အခြားအလုပ်ရုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအသင်း များနှင့်ပိုမိုဆက်နွယ်နိုင်ရန် လေ့လာခဲ့ကြပါသည်။ ထို့ကြောင့် လေ့လာချက်များမှရရှိလာသော အချက် အလက်များအား လူမှုအသိုင်းအ၀ိုင်း၊ လူထုအသိုင်းအ၀ိုင်းနှင့် လူမှုအဖွဲ့အစည်းတို့အား အဓိကထား သတင်းဖြန့်ချိရန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဂျန်ပန်နိုင်ငံတက္ကသိုလ်မှ ရာစုများစွာကတည်းက မိနာမာတရောဂါ ပြဿနာ၊ လူထုကြား၎င်းရောဂါကာကွယ်ခဲ့ပုံနှင့် အလုပ်ရုံစက်ရုံများအားကိုင်တွယ်ခဲ့သောဥပဒေလမ်း နည်းများ စသည်တို့ကိုတင်ပြခဲ့ပါသည်။
အန်ဒါမန်လူမျိုးစုဆက်နွယ်မှုစီမံကိန်းအဖွဲ့သည် ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများကိုယ်စားလှယ် နိုင်ဒေါင် စယန် (မ်)အား သုတေသနပြုလုပ်နေချိန်အတွင်း သွားရောက်လေ့လာပြီးသတင်းအချက်လက်များ ရယူစေခဲ့ပါသည်။ ၎င်းစီမီနာသို့ မြန်မာနိုင်ငံမှ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်စောင့်ကြည့်ရေး အသင်းကိုယ်စားလှယ် ၂၅ ဦးအနက် ထားဝယ်၊ ရခိုင်နှင့် အခြားတိုင်းရင်းသားများလည်းပါဝင်တက် ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။ မနက်ပိုင်းတွင် သုတေသနအဖွဲ့မှ ဒေါက်တာဟာနာဒ မာစာနိုရိ (ကုမာမိုတိုကက် ကုအင်တက္ကသိုလ်မှ မိနာမိတပညာသုတေသနဌာနမှူး)သည် မာ့တာဖုစီးပွားဇုန်အတွင်းဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ် နှင့် ရှုပ်ထွေးသောထိခိုက်မှုတွေအကြောင်းအရာများအား တင်ပြခဲ့ပါသည်။ နိုင် ဒေါင်စယန်(မ်)မှလည်း ၎င်းအကြောင်းအရာများအား နားလည်အောင်ကြိုးစားပြီးလျှင်၊ EIA / HIA နှင့်ပတ်သက်သောအချက်လက်အား နားမလည်သဖြင့်ထ၍ ထိုင်းဘာသာဖြင့်မေးခွန်းထုတ်ရာ
“ကျွန်တော် ဖန်ငါက ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားပါ၊ ကျွန်တော်စထီယန်ကိုစေ့ နခပရထိ(ပ်)ရဲ့ အန်ဒါမန် လူမျိုးစုဆက်နွယ်မှုစီမံကိန်းအဖွဲ့မှာ အလုပ်လုပ်နေပါတယ်၊ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ထားဝယ်ကလူတွေဟာ ဒီစီမံကိန်းကို ဖြစ်ပေါ်စေချင်ကြတယ်၊ ဒါပေမယ့် ထိခိုက်မှုများကိုတော့သူတို့မသိကြဘူး၊ ဒီနေ့ကျွန် တော့အနေနဲ့ ဒီမှာလာရောက်လေ့လာခွင့်ရတာ တကယ်အံ့သြမိပါတယ်။ ကျွန်တော့အနေနဲ့ သိချင် တာကတော့ လူထုအတွက်ထိခိုင်စေနိုင်တဲ့၊ ကျန်းမာရေးအတွက်ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ကိစ္စမှာ ပြုလုပ်တဲ့သူ က ကုမ္ပဏီကပဲဖြစ်ပြီး သုတေသနပြုလုပ်တဲ့လူတွေကိုပိုက်ဆံပေးခိုင်းကြတာ၊ ပြီးတော့ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် စလုံးပဲ အကျိုးအမြတ်ခံစားကြရတယ်၊ သူတို့အချင်းချင်းလက်တွဲလို့ရတယ်။ သို့သော် လူထုအတွက် ကောင်းကျိုးခံစားရမယ်လို့ ဘယ်လိုလုပ်ပြီးအာမခံနိုင်မလဲ၊ ဘယ်လိုလုပ်ပြီးလူထုအတွက် အကျိုး အမြတ်ခံစားခွင့်ရစေနိုင်သလဲ၊ ဒါမှမဟုတ် လူထုကိုယ်တိုင်လုပ်ခွင့်ရနိုင်မလဲ၊ ကျွန်တော် ဒါကိုသိချင် ပါတယ်ခင်ဗျား”
နိုင်ဒေါင်စယန်(မ်)၏မေးခွန်းတို့ကြောင့် စီမီနာတက်ရောက်ကြသောသူများ အလွန်စိတ်ဝင်စားလျက်ရှိ ကြသည်။ မာ့တာဖုစီးပွားရေးဇွန်ကလူထုတစ်ဦးမှလည်း ထပြောပြသည်မှာ ထိုင်းနိုင်ငံဘက်မှ မြန်မာ နိုင်ငံ ထားဝယ်ဘက်သို့ လူထုညစ်ညမ်းမှုတွေထုတ်လွှတ်နေတာဖြစ်သည့်အတွက် ၎င်းအနေနှင့်မြန်မာ နိုင်ငံသားများအား အလွန်ရှက်မိကြောင်း၊ ထိုလေထုညစ်ညမ်းမှုသည် လူသားများအတွက်ဆိုးဝါးလွန်း သောအန္တရာယ်ကိုဖြစ်စေနိုင်သည်ကိုလည်း ၎င်းကနားလည်ထားကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် ထိုစီမံကိန်းအား မာ့တာဖုနယ်မြေတွင် ထပ်မချဲ့ရန် အစိုးရအားတောင်းဆိုလျက်ရှိသည့်အပြင် ထားဝယ်စီမံကိန်းကိုပါ ပြန်လည်သုံသပ်ကြရန် တောင်းဆိုခဲ့ကြပါသည်။
တကွာပါ နာရေးကူညီမှုအသင်းမှ ဆိုင်းဘုတ်တင်ကာ အသင်း၏ရည်ရွယ်ချက်များ ကြေငြာခြင်း
တကွာပါနာရေးကူညီမှုအသင်းမှ ဆိုင်းဘုတ်တင်ကာ မိမိတို့၏အသင်းအား ကြေငြာလိုက်ပါသည်။ အသင်းစတင်တည်ထောင်သည်မှာ ၁ နှစ်ရှိပြီး၊ တကွာပါမြို့နယ်၊ ဖန်ငါခရိုင်အတွင်းတည်ရှိပါသည်။ ထို အသင်းသည် အသုဘအတွက်ကူညီမှုပေးမည်ဖြစ်ပြီး ဆိုင်းဘုတ်တွင် ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများ၏ ဘာသာဖြင့်ရေးထားသဖြင့် ဖတ်ရသည်မှာ ချစ်စရာကောင်းပါသည်။ ရည်ရွယ်ချက်မှာ …… အသင်းဝင် တစ်ဦး(သို့)တစ်ဦးတစ်ယောက်ကသေဆုံးလျှင် မိမိတို့အနေနှင့် ကာယအားသော်လည်းကောင်း၊ ငွေ အားဖြင့်သော်လည်းကောင်း အကူအညီပေးနိုင်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံမှ ထိုင်းနိုင်ငံတွင်လာရောက်အလုပ် လုပ်ကိုင်နေသော အလုပ်သမားတစ်ယောက်ယောက်က အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်သေဆုံးပါက မိမိ တို့အနေနှင့် အကူအညီပေးနိုင်သည်။ မိသားစုတစ်ခုခုက အခက်အခဲများကြုံတွေ့နေပါက မိမိတို့အနေ နှင့် အကူအညီပေးနိုင်သည်၊ ဥပမာ ၁ – ဘုန်းကြီးသွားပင့်ပေးခြင်း၊ ၂ – ရဲစခန်းတွင်လူသေထောက်ခံ စားသွားတောင်းပေးခြင်း၊ ၃ – အသုဘမီးသဂြိုလ်ရန်အတွက် ဘုန်းကြီးကျောင်းနှင့်ဆက်သွယ်ပေးခြင်း၊ ၄- မီးသဂြိုလ်ရန်အကူအညီပေးခြင်း၊ ၅ – တရားလာနာခြင်း၊ ၆ – လူသေ၏နေ့စဉ်မှတ်တမ်းနှင့်ဓါတ်ပုံ များကို ဆွေမျိုးအအတွက်လုပ်ပေးခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့အနေနှင့် အထပ်ဖော်ပြပါ အကူအညီများအား ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်သည်။ အသင်းအနေနှင့် ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများအား တကွာပါမြို့နယ်အတွင်း ရှိ ဘန်မွမ်းကျေးရွာအုပ်စုမှ ဘန်ယိုင်ကျေးရွာအုပ်စုအထိသာ ကူညီပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ဤကဲ့သို့ အလုပ်သမားများ မိမိတို့ကိုယ်တိုင်စုပေါင်းလုပ်ဆောင်ခြင်းသည် ကောင်းသောလက္ခဏာဖြစ်ပါသည်။
အကူအညီပေးသောနည်းလမ်းများမှာ – ၁။ အကယ်၍လူနာတစ်ဦးတစ်ယောက်က ဆေးရုံသို့အရေးပေါ်သွားရန်လိုပါက အသင်းမှ ဘတ် ၁၅၀ – ၁၀၀၀ ကူညီသည်။
၂။ အကယ်၍အသင်းဝင်တစ်ဦးတစ်ယောက်ကသေဆုံးပါက အသင်းမှနာရေးကူညီငွေ ဘတ် ၃၀၀၀ ထုတ်ပေးသည်။ အကယ်၍ အသင်းဝင်၏မိသားစုထဲကဖြစ်လျှင် ဘတ် ၂၀၀၀ ထုတ်ပေးသည်။
၃။ အခြားအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ဆက်သွယ်၍ လိုအပ်သောအကူအညီများတောင်းပေးသည်။
၄။ အကယ်၍ ဆွေမျိုးမရှိသော အသုဘဖြစ်ပါကပြီးအသင်းအားအကူအညီတောင်းလာပါက ဘတ် ၂၀၀၀ ဖြင့်အကူအညီပေးသည်။
၅။ အသင်းမှ နာရေးကူညီမှုကို ဘန်မွမ်းကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဘန်ယိုင်ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းသာ အကူ အညီပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ အခြေအနေအရလိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ ကူညီသွားမည်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သေ ဆုံးသူဘက်မှ အလွန်အခက်အခဲနှင့်ကြုံနေပါက အသင်းမှ အသုဘအတွက်အစအဆုံးကူညီပေးမည် ဖြစ်သည်။ Share this:TwitterFacebookLike this:Like Loading...
This entry was posted in Uncategorized on September 25, 2013 by andamanceia.	Post navigation
← GLT Buddy…..We love each other.
ဖန်ငါခရိုင်ရှိ PCC နှင့် CBO ဘန်နင်ယန်စာကြည့်တိုက်အသင်းတို့သည် ခိခက်ဆေးခန်းမှ အခြေခံကျန်းမာရေးပြုစု နည်း လေ့လာသင်ယူခဲ့ကြသည်။ →